ICetilistat (282526-98-1) Umzi mveliso wabaxhasi
I-CMOAPI inoluhlu olupheleleyo lwezixhobo zeCetilistat, kwaye inenkqubo yolawulo lomgangatho iyonke.
Cetilistat powder Ulwazi loLwazi
igama Cetilistat powder
Ukuthanda Grey Powder
Isisindo somzimba 316.31 g / mol
ICetilistat (CAS akukho.282526-98-1Ikwabizwa ngokuba yi-ATL-962, ATL 962 okanye iCitilistat sisiyobisi esiboniswe kunyango lokutyeba kakhulu. Isetyenziselwa ikhalori ephantsi, ukutya okunamafutha asezantsi, kunye nokuzilolonga ngendlela efanelekileyo ukunceda ukunciphisa umzimba.
Ichiza lokulwa nokutyeba kakhulu kwe-cetilistat lithengiswa phantsi kwamagama eebranti ezahlukeneyo kubandakanya Cetislim, I-Kilfat, Oblean, kunye ne-Checkwt.
I-Cetilistat yi-benzoxazine, isisu se-lipase inhibitor esisebenza ikakhulu ngokuthintela ukwetyiswa kunye nokufunxwa kwamafutha atya ukutya.
Njani Cetilistat uphatha ukutyeba?
Ukutyeba kakhulu yenye yeengxaki zempilo yoluntu ezikhoyo namhlanje. Sisifo esintsonkothileyo, esinganyangekiyo kunye nesinokuphazamiseka kwimisebenzi emininzi ebonakaliswa kukuqokelelwa kwamafutha / izicubu zeadipose.
Ukutyeba kakhulu kunxulunyaniswa nokuphazamiseka kwempilo enje ngohlobo lweswekile 2, uxinzelelo lwegazi, ihyplipidemia, icholesterol ephezulu, umhlaza othile, kunye nesifo sentliziyo esifana nokubetha kunye nokuphazamiseka kwentliziyo.
Ukutyeba kumazwe amaninzi kuye kwafikelela kubhubhane kwaye ngenxa yoko inkxalabo yezempilo kwihlabathi liphela.
Uphando lubonisa ukuba ukulahleka kwesisindo okuqhubekayo kwe-5 ukuya kwi-10% yesisindo sakho sokuqala somzimba kunokunciphisa kakhulu ukuphazamiseka okunxulumene nokukhuluphala.
I-Cetilistat ithathwa njenge-anti-obesity agent. Iiarhente ezichasene nokukhuluphala zihlala zonyusa inkcitho yamandla kungoko ukwehla kobunzima kwimigaqo ye-neural kunye ne-metabolic.
I-Cetilistat sisifo sephepha lesisu sepancreatic lipase inhibitor esisebenza ngokufanelekileyo ngokuchasene nokutyeba kakhulu kwizifundo zabantu.
I-Cetilistat iyasebenza Ngokuthintela ukwetyiswa kunye nokufunxwa kwamanqatha ngaphakathi kokutya okutyayo. Xa amanqatha engatyiswanga ayakhutshwa kwilindle ngexesha lokuhamba kwamathumbu. Kufezekisa oku ngokuthintela i-enzyme lipases ejongene nokophula i-triglycerides (i-fat / lipid emzimbeni) emathunjini.
The iziphumo zecetilistat ke ngoko zibonisiwe kwiphecana lesisu. Kungenxa yoko le nto kuthetha ukuba i-cetilistat yahlukile kwezinye iiarhente ezichasene nokutyeba kakhulu ezichaphazela ingqondo yakho ukunciphisa umdla wokutya ngenxa yokuba iyasebenza.
Xa ukwetyiswa kunye nokufunxwa kwamafutha ekudleni kuthintelwe, ukubekwa kwamafutha kuncitshisiwe yinkcitho yamandla ephantsi ekhokelela ekunciphiseni ubunzima.
Nangona kunjalo, iCetilistat iyakukunceda ukunciphisa umzimba kukuphezu kwakho ukugcina ukutya okunesondlo esinamafutha asezantsi okuhamba nomthambo wokulawula ukutyeba okunempumelelo.
ICetilistat VS Orlistat
Zombini i-cetilistat kunye ne-orlistat ngamachiza amiselweyo asetyenziselwa unyango lokutyeba kakhulu. Babonisa indlela efanayo yesenzo apho bafezekisa ukunciphisa umzimba.
I-Cetilistat kunye ne-orlistat sisisu se-lipases inhibitor esithintela okanye sinciphise ukwetyisa kunye nokufunxwa kwamafutha okutya. I-lipases inoxanduva lokuwohloka kwe-triglycerides emathunjini. Amafutha angatshintshanga endaweni yoko akhutshwa ngokuhamba kwamathumbu kwilindle lomntu. Lo msebenzi uqinisekisa ukuba amafutha awangeni kumzimba okhokelela ekwehliseni ubunzima.
Ukuncitshiswa kobunzima obukhulu kuye kwaxelwa kuzo zombini i-cetilistat kunye ne-orlistat. Impumelelo ye-cetilistat vs orlistat ixhomekeke kwindlela ophila ngayo njengoko ifuna ukuba unamathele kwi-calories esezantsi yokutya okunesondlo kunye nokuzilolonga rhoqo.
I-Cetilistat kunye ne-orlistat zibonisa ukonyusa ulawulo lwe-glycemic njengoko kungqinwa kukuncipha okukhulu kwe-plasma glycosylated hemoglobin. Banciphisa umngcipheko wokuphazamiseka okunxulumene nokukhuluphala okunje ngezifo zentliziyo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, amanqanaba aphezulu e-cholesterol, kunye nohlobo lweswekile yesi-2.
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo kunye ne-cetilistat kunye ne-orlistat yimpembelelo yesisu ngokuqhelekileyo ngenxa yamafutha angatshintshi. Nangona kunjalo, xa uthelekisa i-cetilistat vs orlistat ngokweziphumo ebezingalindelekanga, iziphumo ebezingalindelekanga zinxulunyaniswa ne-orlistat kune-cetilistat. Ukongeza, ubuzaza beziphumo zichazwa ngakumbi nge-orlistat kune-cetilistat.
Xa uthelekisa ukunyamezeleka kwe-cetilistat vs orlistat, i-cetilistat iye yaxelwa ukuba iyanyamezeleka kune-orlistat.
Uphononongo lweeveki ezili-12 olubandakanya abaguli abatyebe kakhulu abane-2 yeswekile lwenziwa ukuvavanya ukunciphisa umzimba, ukunciphisa i-hemoglobin ye-glycosylated, kunye nokunyamezeleka kwe-cetilistat xa kuthelekiswa ne-orlistat. Unyango lwaludityaniswa nokutya okunamafutha asezantsi ukuya kumodareyitha kunye nesifo seswekile esilawulwa yi-metformin.
Uphononongo lufumanise ukuba zombini i-cetilistat kunye ne-orlistat banciphise ubunzima kunye nokuphuculwa kolawulo lwe-glycemic. Amachiza nawo anciphise umngcipheko wokuphazamiseka kwentliziyo kunye nokunciphisa ukubonakala kwesinqe esibonisa isifo sentliziyo.
Kolu phononongo, iziphumo ebezingalindelekanga eziqwalaselweyo yayiziziphumo zesisu ezazininzi kunye ne-orlistat, kunye nobunzima beziphumo ezinxulumene ne-orlistat kwafunyaniswa ukuba ziphezulu kunezo ze-cetilistat. Umahluko kwiziphumo ze-cetilistat vs orlistat unokubalelwa kulwahlulo lobume nolwemichiza.
Ukurhoxiswa kolu phando kwakubangelwe ziziphumo ebezingalindelekanga kwaye zazininzi nge-orlistat kune-cetilistat. Ngaphaya koko, i-cetilistat yayinyamezeleka ngakumbi kune-orlistat.
Ngubani onako Sebenzisa iCetilistat?
Unokucinga ngokuthatha iCetilistat (282526-98-1) ukuba ufuna ukunciphisa umzimba. Nangona kunjalo, njengalo naliphi na elinye ichiza, thatha amanyathelo okhuseleko xa usela amayeza.
I-Cetilistat iyacetyiswa kubantu abanesalathiso sobunzima bomzimba (BMI) obuphezulu kunama-27. Kukwacetyiswa ukuba uthathe i-cetilistat ukuba i-BMI yakho iphezulu kune-27 kwaye unengxaki yeemeko ezinxulumene nokutyeba okunje ngesifo seswekile noxinzelelo lwegazi. I-BMI sisalathiso samafutha omzimba abalwa ngokwahlula ubunzima bakho ngokweekhilogram ngesikwere sokuphakama kwiimitha.
Ukuba ukhethe ukuthatha i-cetilistat, qiniseka ukuthatha idosi ye-cetilistat ekucetyiswayo kunye nokutya kwakho. Imilinganiselo emiselweyo ye-cetilistat ithathwa ngcono xa kutyiwa, ngexesha okanye ukuya kuthi ga kwiyure enye emva kokutya kwakho.
Ichiza le-cetilistat livela kwiifomsile okanye kwifomathi yolawulo lomlomo ngeglasi yamanzi. Unokufumana kwakhona i-cetilistat powder. Idosi efanelekileyo ye-cetilistat kunye nobude bonyango buya kugqitywa ngumboneleli wakho wezempilo ngokusekwe kwimeko kunye nempendulo yokuqala kunyango.
Ukulahleka kobunzima beCetilistat Izibonelelo kodwa aziboniswanga ebantwaneni, kungoko ke le nto akufuneki ubanike abantwana. Oku ngakumbi kubantwana ekufikiseni njengoko i-cetilistat inokuba nefuthe ekukhuleni kwabo ngakumbi nangobude.
I-Cetilistat ithathwa njengengakhuselekanga koomama abakhulelweyo okanye abasetyhini abazama ukukhulelwa. Ingabeka umngcipheko empilweni yomntwana ongekazalwa.
Oomama abancancisayo bayacetyiswa ukuba baphephe i-cetilistat njengoko inokudlula iye emntwaneni.
Ugqirha wakho unokukucebisa ukuba uthathe okanye uthintele i-cetilistat ngenxa yezinye iimeko zempilo ezinje nge-hypersensitivity, cholestasis (isifo sesibindi), kunye ne-malabsorption syndrome engapheliyo.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeCetilistat
I-Cetilistat powder ithathwa njengekhuselekileyo kodwa ukuba ugqitha kumthamo we-cetilistat okanye usilele ukulandela imiyalelo ufumana iziphumo ebezingalindelekanga ze-cetilistat. Ezi ziphumo bezingalindelekanga zinokwenzeka ekuqaleni kodwa zinobulali kwaye kufuneka ziyemka nokuqhubeka nokusebenzisa iziyobisi. Ukuba abahambi, kuya kufuneka unxibelelane nogqirha wakho.
Iziphumo eziqhelekileyo ze-cetilistat zezi;
Irhasi kunye nokukhutshwa
Ukuhamba ngokukhawuleza kunye nokuhamba rhoqo kwamathumbu kunokuba nzima ukulawula
Izitulo ezinamafutha okanye ezinamafutha
Ezinye iziphumo ezinqabileyo kodwa ezinzulu kakhulu ze-cetilistat ziyakwenzeka. Kuya kufuneka ubonane nogqirha wakho ngokukhawuleza xa uqaphela ezi ziphumo zilandelayo;
I-jaundice (ngamehlo amthubi okanye umzimba uphela)
Kunzima ukugwinya okanye ukuphefumla.
I-Cetilistat yokuncipha kobunzima kulawulo lokutyeba yeyona nto iphambili eyaziwayo ngayo. Kukho ezinye izibonelelo ze-cetilistat ezenza ukuba zahluke kwaye zime phakathi kwezinye iziyobisi ezilahlekileyo.
Apha ngezantsi kukho izibonelelo ze-cetilistat;
Kukunceda ugcine indlela yokuphila esempilweni ngokunciphisa umzimba
I-Cetilistat yenye yeziyobisi ezilahlekayo kakhulu kunye ne-arhente yokulwa nokutyeba kakhulu. Kubomi bakho obuqhelekileyo ukufumana ubunzima obugqithisileyo kukhokelela ekwandeni kwesayizi kunye namafutha omzimba ahlala ekubhekiswa kuwo njengokutyeba kakhulu okanye ukutyeba kakhulu. Ezi meko zimbini zinxulunyaniswa nemicimbi yezempilo enje ngohlobo lweswekile lwesifo seswekile, isifo sentliziyo ukubetha, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, kunye nomhlaza othile ofana nomhlaza kunye nomhlaza webele.
Umahluko phakathi kokutyeba kakhulu kunye nokutyeba kakhulu ngabantu sisalathiso sobunzima bomzimba (BMI). Umntu uthathwa njengotyebileyo xa i-BMI inkulu okanye ilingana nama-25 ngelixa umntu otyebe kakhulu ene-BMI enkulu okanye elingana nama-30.
Ukuthatha i-cetilistat kuya kunceda umzimba wakho ukunciphisa ukutyeba kwamafutha ngaloo ndlela ugcine i-BMI esempilweni kwaye ngenxa yoko indlela yokuphila esempilweni. Oku kunjalo kuba kunciphisa amathuba eemeko ezisongela ubomi ezinxulumene nokukhuluphala.
Inceda ekunciphiseni ubunzima kunye nokunciphisa i-hemoglobin ye-glycosylated kwizigulana ezinesifo seswekile
Isifo seswekile kunye nohlobo lwesibini lweswekile ekwabizwa ngokuba sisifo seswekile sisifo esixhaphakileyo kwizigulana ezityebe kakhulu. Uhlobo lwe-2 yeswekile lwenzeka xa iiseli zomzimba zichasene nefuthe elifanelekileyo le-insulin, eya ngqo iglucose yegazi kwiiseli. Oku kukhokelela ekufumaneni iswekile egazini. ukutyeba kakhulu kuyaziwa ngokunyusa kakhulu ukubakho kohlobo lweswekile 2.
I-hemoglobin ye-Glycosylated (i-hemoglobin apho i-glucose ibophelela khona) ngumlinganiselo wolawulo lwe-diabetes mellitus lwexesha elide. Inqanaba le-hemoglobin ye-glycosylated (HbA1c) ibonisa i-glucose yegazi ephakathi kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Inqanaba eliqhelekileyo le-hemoglobin ye-glycosylated yi-7% kodwa uninzi lwabantu abanesifo seswekile banokufikelela kwi-9% kuphela.
Kwiveki ye-12, engenamsebenzi, isifundo sonyango kunye nolawulo lwe-placebo, abaguli abatyebe kakhulu abanesifo seswekile sesi-2 banikwa i-cetilistat (40, 80, okanye 120mg kathathu mihla le). Kwakufuneka babambelele kwisidlo se-hypocaloric. I-Cetilistat yafunyanwa ukunciphisa kakhulu ubunzima kunye nokunciphisa i-hemoglobin ye-glycosylated (HbA1c). Kwaye kwaqatshelwa ukuba i-cetilistat yanyamezeleka kakuhle.
Ngaphandle kokusebenza kwayo ekunciphiseni ubunzima kunye nokulawula ukutyeba, kukho okungakumbi kuyo. I-Cetilistat iyanyamezeleka emzimbeni kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezinokuthomalalisa kwaye ezinokuthi zinyamalale ngokuqhubeka nokusetyenziswa kwecetilistat.
Nangona uninzi lwethu lusebenza ngokukuko kunyango, kukwalungile ukujonga ichiza elinyamezekayo emzimbeni wakho.
Kwinqanaba 2 isifundo sonyango siqhutyelwe iiveki ze-12 kusetyenziswa zombini i-cetilistat kunye ne-orlistat efumaneka ngokubanzi. Amachiza amabini okuphulukana nobunzima afunyaniswa ukuba ayasebenza ekunciphiseni ubunzima, ukunciphisa i-hemoglobin ye-glycosylated kunye nokunciphisa isinqe sesinqe. Kwakhona, i-cetilisat yafunyanwa yanyamezeleka kune-orlistat, kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa ezinxulunyaniswa necetilistat.
Inceda ukuba ufezekise iinjongo zakho ngexesha elifutshane
Ukwehla kobunzima yinjongo yexesha elifutshane enokufezekiswa ngokutshintsha ukutya kunye nokuhamba kunye nokuzilolonga rhoqo. Nangona kunjalo, ukugcina ubunzima obunempilo yinjongo yexesha elide.
Ugqirha wakho unokucebisa amayeza okuphulukana nomzimba xa indlela yokuphila esempilweni (ukutya kunye nokuzilolonga) ingafezekisi ukulahleka kwesisindo okucetywayo. I-Cetilistat lelinye lamayeza anokusetyenziswa kunye nokutya okunamafutha asezantsi kunye nokuzilolonga rhoqo. Ngokungafaniyo nezinye iziyobisi ezichasene nokutyeba kakhulu ezithatha ixesha elide ukufezekisa ukwehla kobunzima, i-cetilistat ithatha malunga neeveki ezili-12 ukubonelela ngobunzima obufunwayo.
Ngamana unokunceda ukunciphisa inqanaba le-cholesterol yakho
Ikholesterol ibhekisa kwinto ene-wax. Iyafuneka emzimbeni wakho ukwakha iiseli nangona kunjalo, okuninzi kunokubangela imiba emzimbeni.
Ikholesterol yenziwa sisibindi ngelixa ezinye zivela kukutya okutyayo njengenyama, iinkuku, kunye neemveliso zobisi ezinamafutha apheleleyo. Kukho iintlobo ezimbini ze-cholesterol. Ubuninzi be-lipoprotein (LDL) ye-cholesterol okanye "i-cholesterol" embi kunye ne-lipoprotein ephezulu okanye "i-cholesterol" enhle. I-LDL inegalelo ekwakheni amanqatha kwimithambo yegazi kungoko inyusa umngcipheko wezifo zentliziyo ezinje ngokubetha kwentliziyo nokuhlaselwa sisifo sentliziyo.
Ukutyeba kakhulu kwandisa umngcipheko wamanqanaba aphezulu e-cholesterol. Ukutyeba kakhulu kwandisa inani le-cholesterol ye-LDL ngokuguqula impendulo yomzimba wakho kumafutha owasebenzisayo. Ukudumba okubangelwa kukutyeba kunciphisa nokuphendula komzimba wakho kutshintsho ekutyeni okutyayo. Ukongeza, ukunganyangeki kwe-insulin kuqhelekile kwizigulana ezinokutyeba kakhulu. Oku kuchaphazela inkqubo eqhelekileyo yamafutha emzimbeni wakho.
I-Cetilistat inokunciphisa i-cholesterol iyonke kunye ne-cholesterol ye-LDL.
Kwisifundo esichaphazela iigundane, i-cetilistat elawulwa ngomlomo yafunyanwa ngenjongo yokuphucula ukutyeba kunye ne-cholesterol iyonke.
Yehlisa umngcipheko wesifo sentliziyo
Isifo sentliziyo ligama elihlangeneyo elibhekisa kwiingxaki ezichaphazela intliziyo okanye imithambo yegazi. Isifo sentliziyo sibandakanya izifo ze-coronary artery ezifana nokuhlaselwa sisifo sentliziyo kunye ne-angina, ukubetha, ukusilela kwentliziyo, kunye nesifo sentliziyo phakathi kwamanye.
Unobangela wesifo sentliziyo uyahluka ngokuxhomekeka kwisifo esithile. Umzekelo, isifo semithambo yegazi, ukubetha, kunye nesifo semithambo sisenokubangelwa luxinzelelo lwegazi oluphezulu, udidi lwesibini lweswekile, ukutshaya, ukungazilolongi, ukutyeba kakhulu nokungondleki. Ukutyeba kuqikelelwa kwiakhawunti malunga neepesenti ezi-2 zesifo sentliziyo.
I-Cetilistat, ke, inciphisa umngcipheko wesifo sentliziyo ngokunyanyisa ukutyeba kunye nokukhuthaza ukutya okufanelekileyo okunendima ekuthinteleni ukubakho kokuphazamiseka kwentliziyo.
Kwiveki ye-12 engenamsebenzi, isifundo esingaboni kabini esibandakanya abaguli abatyebe kakhulu abanesifo seswekile, i-cetilistat yenziwa nge-40, 80, okanye i-120 mg kathathu mihla le. Abathathi-nxaxheba bacetyisiwe ukuba bagcine ukutya okunamafutha asezantsi ngexesha lokufunda.
Olu phononongo luchaze ukuncitshiswa kobunzima kunye nokuphuculwa kolawulo lweglycemic. Ukongeza, kwabakho ukuncitshiswa okubonakalayo kokujikeleza kwesinqe yenye yezinto ezinobungozi kwisifo sentliziyo.
Ngamana unokunciphisa uxinzelelo lwegazi
Uxinzelelo lwegazi oluphezulu olubizwa ngokuba yi-hypertension yimeko apho amandla egazi ngokuchasene neendonga zemithambo ahlala ephakamile ixesha elithile. Uxinzelelo lwegazi luyingozi njengoko inyanzela intliziyo ukuba isebenze nzima kakhulu ikhokelela ekuqineni kwemithambo.
Uxinzelelo lwegazi lunxulunyaniswa nezifo ezisongela ubomi ezinje ngokubetha, isifo sezintso, kunye nezifo zesibindi phakathi kwabanye.
Ukutyeba kakhulu okanye ukutyeba kakhulu kuphakamisa amathuba akho okuphuhlisa uxinzelelo lwegazi. Uxinzelelo lwegazi luyanda ngokwanda kobunzima.
Oko kuthetha ukuba ukunciphisa umzimba yenye yeendlela zokunciphisa uxinzelelo lwegazi. Kulapho i-cetilistat ingena khona kuba ikhokelela ekulahlekeni kobunzima ngexesha elifutshane.
Ndingaphi Thenga iCetilistat?
Ukuba ucinga ukusebenzisa i-cetilistat thenga kwi-intanethi kwindlu yakho. I-Cetilistat powder iyafumaneka kwi-intanethi kubathengisi be-cetilistat okanye abavelisi beecetilistat iivenkile. I-CMOAPI ngomnye wabavelisi beetetilistat abathengisa iimveliso ezisemgangathweni ngenkonzo yomthengi elungileyo kakhulu.
Xa kuthengwa i-cetilistat powder okanye iicapsilistat capsules ukusuka I-CMOAPI okanye abanye abathengisi be-cetilistat bajonge ngononophelo iilebhile ukuba zisetyenziswa ngokufanelekileyo na. Cinga ngedosi yecetilistat ekhuthazwayo njengoko kuyalelwe ngumvelisi wecetilistat kodwa uphinde ulandele iingcebiso ngumboneleli wakho wezempilo.
Kufunda uphononongo lwecetilistat kumava obuqu anokukunceda ukuba ukuqonde ngcono ukusebenza kwawo kunye nokhuseleko. Uninzi lwabathengi be-cetilistat bathenga kwi-Intanethi kwaye banokushiya uphononongo lwe-cetilistat ngokusekwe kumava abo.
Ixabiso leCetilistat Ikwaqwalaselwa xa ufuna ukuyithenga. I-CMOAPI ngomnye wabathengisi beetetilistat abanokuthi babonelele ngexabiso lokukhuphisana leecetilistat. Nangona kunjalo, amaxabiso e-cetilistat akufuneki akumfamekise ekukhetheni imveliso ekumgangatho ophantsi.
Ukuthenga kwintuthuzelo yekhaya lakho kunokuba sisilingo sokuthenga ngokungxama, nangona kunjalo, kusafuneka wenze amalungiselelo afanelekileyo okwazi ukubakho kwamachiza owafunayo kwangaphambili.
UBryson, A., de la Motte, S., kunye no-Dunk, C. (2009). Ukuncitshiswa kokufakwa kokutya okunamafutha ngenoveli yamathumbu lipase inhibitor cetilistat kumavolontiya asempilweni. Ijenali yaseBritane yekhemesti yezonyango, 67(3), 309–315. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2008.03311.x.
IHainer V. (2014). Amagqabantshintshi amayeza amatsha e-antiobesity. Iingcamango zengcali kwi-pharmacotherapy, 15(14), 1975–1978. https://doi.org/10.1517/14656566.2014.946904.
Kopelman, P., Groot, G., Rissanen, A., Rossner, S., Toubro, S., Palmer, R., Hallam, R., Bryson, A., kunye noHickling, RI (2010). Ukwehla kobunzima, ukunciphisa i-HbA1c, kunye nokunyamezeleka kwe-cetilistat kwisigaba se-2 esilawulwa ngokungekho mthethweni, esilawulwa yi-placebo kwisifo seswekile esityebileyo: ukuthelekisa ne-orlistat (Xenical). Ukutyeba kakhulu (iSilver Spring, Md.), 18(1), 108–115. https://doi.org/10.1038/oby.2009.155.
Kopelman, P; UBryson, A; IHickling, R; URissanen, A; URossner, S; Toubro, S; IValensi, P (2007). "I-Cetilistat (i-ATL-962), inoveli ye-lipase inhibitor: Isifundo esilawulwa yi-placebo esilawulwa nge-placebo sokunciphisa ubunzima kwizigulana ezityebe kakhulu". Ijenali yaMazwe ngaMazwe yokuTyeba kakhulu. 12 (31): 3–494. ikhonkco: 9 / sj.ijo.10.1038. IINKCUKACHA:
IPadwal, R (2008). "I-Cetilistat, i-lipase inhibitor entsha yokunyanga ukutyeba". Uluvo lwangoku lweziyobisi. 9 (4): 414– PMID 18393108.
Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K (2008). "I-Cetilistat (i-ATL-962), inoveli yepancreatic lipase inhibitor, ivuselela ukutyeba komzimba kunye nokuphucula iiprofayili zeepid kwiigundane". IHormone kunye noPhando lweMetabolic. 40 (8): 539– doi: 10.1055 / s-2008-1076699. IINKCUKACHA: